ProjectLibre: Ny solon'ny Microsoft Project | Avy amin'ny Linux
Raha iray amin'ireo olona mila mitantana ny tetikasany ianao, na injeniera ianao na mpampiasa tsotra, dia ampiasainao ho azy io Microsoft ProjectVaovao tsara no omeko anao: Efa manana safidy hafa maimaimpoana izahay ProjectLibre ary tsy vitan'ny maimaim-poana izy io, fa manana ireto toetra manaraka ireto koa:
Fanohanana Microsoft Project 2010
UI vaovao vita amin'ny kofehy
Mety ho fanontana
Fanamboarana bibikely manan-danja sy maro hafa
Raha ny filazan'ny mpamorona azy, ny hevitra voalohany dia ny fananganana fomba hafa Microsoft Project Server antso ProjectLibre Project Server, saingy tsapan'izy ireo fa tsy maintsy nanolotra fitaovana ho an'ny birao aloha izy ireo ary avy eo, hanolotra ny kinova ho an'ny mpizara.
Raha ny tena manokana dia tsy mbola nampiasa an'io karazana fitaovana io mihitsy aho, saingy heveriko fa ireo mpampiasa nanao izany dia hahita mpisolo toerana tena tsara. Manantena aho fa misy olona eto hizara ny heviny momba an'io raharaha io.
Amin'ny tranokala fampidinana dia azonao atao ny mahita mimari-droa Windows, Linux y Mac OS X.
Sintomy ny ProjectLibre
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » ProjectLibre: Ny solon'ny Microsoft Project
Iray amin'ireo lesoka lehibe nataoko, solon'ny MS Project.
Mampalahelo ahy izany fa fampiharana ny lanjany, ny fitsapana.
Ary hitako fa ny interface dia mitovy amin'ny microsft office 2007 sy 2010, ho lany amin'ny LibreOffice mitovy amin'ny Interface mitovy ve izany?.
Mety tsara raha nanapa-kevitra ny hanao ny suite an'ny Office ireo mpamorona ireo dia heveriko fa ho lasa fenitra ho an'ny Linux izany.
Heveriko fa tsy ho zavatra tena mety izany nanomboka tamin'ity rahona ity izay maro amin'ireo rindranasa ireo no entina mankany amin'ny rahona. Ohatra ny google docs, mitondra fiara izao, manana mpikirakira teny, takelaka ary famelabelarana hatao ianao. Raha ny marina dia tsy mampiasa libreWriter intsony aho satria mampiasa ilay Document omen'ny google anao ao amin'ny Google Drive anao. Fa mety ho tsara tokoa raha misy efitrano fampiasa feno ho an'ny mpampiasa GNU / Linux sy ny hafa.
Hitako fa tsy dia mavesatra loatra ilay rakitra, ny tetikasa microsoft dia milanja 200 ka hatramin'ny 500 mb farafaharatsiny. Mandritra ny fotoana dia mandeha tsara isika.
Ilaina ny safidy hafa hamoronana an'ity karazana kisary ity, miaraka amin'ny LO dia efa nanana iray ho an'i Visio izahay. Hosedraiko avy hatrany izany.
Efa nisy ny PLANNER (farafaharatsiny ao amin'ny trano fitehirizana Fedora sy debian) ...
Misy ihany koa ny drafitra Calligra Suite
Eny, ny hadisoako, azafady, azafady, tsy nahalala Planner na Caligra Plan aho, na izany aza, manana ny tombony ihany koa ny karazany.
Nampiasa OpenProj aho tamin'ny tetikasa farany nitantana ahy. Fitaovana iray tsy hita izay tsy avelan'izy ireo hanonta PDF, manondro anao ny kinova Projects on Demand (http://openproj.org/pod), izay toa tsy misy raha ny rohy mandroso mankany http://sourceforge.net/projects/openproj/. Mazava ho azy fa miaraka amin'ny fahazoan-dàlana efa navoaka dia azo ovaina izy io, fa ny tena marina dia tsy izany no jerena.
Etsy ankilany, manome sosokevitra ireo hevitra momba ilay tetikasa aho http://sourceforge.net/projects/openproj/, indrindra ireo lafy ratsy izay manorina kokoa.
Inona ny lisansa? Andro vitsy lasa izay dia nijery ilay tranonkala aho fa tsy nahita na inona na inona.
Ao amin'ny pejin'ny tetikasa dia tsy hitako koa izy io. Mila mandeha any amin'ny pejy ianao amin'ny sourceforge ary eo no isehoany: Lisansa Attribution Public Public 1.0 (CPAL), amin'ny wikipedia dia miteny hoe: http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Public_Attribution_License
Tsara izany, talohan'ny nampiasako ny OpenProject fa tsy naharesy lahatra ahy loatra. Hotsapaiko kely ity fitaovana ity.
Misaotra anao. Efa nampidiniko ary andramako. Efa nampiasa ny openproject aho ary mifanaraka kokoa amin'ny xml amin'ny tetikasa guidows
Linuxeyes dia hoy izy:
ny bas tsy milamina miaraka amina tetik'asa lehibe dia tsy atokisana, tsy tokony hamporisihiko tsy hanana volo ho an'ny bun izy ho lasa kinova farafaharatsiny mifaninana amin'i MS PROJECT
Valiny amin'i Linuxeyes
fa tsy tonga toa ny fametrahana azy na rohy hanaovana azy, tsy dia hitako loatra ny fampiasana famerenana mitovy amin'ny hafa